Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 8 2 2021
Västra Götaland waa gobol taajir ka ah duwaanshaha badan. Halkaan waxaa ku yaalo dhulalka beeraha, jiqyaal, wabiyaal, magaalo weeyn oo leh meelo dadka ku yaryihiin oo si teel teel ah uu daganyihiin. Sido kale waxaa jiro jasiradooyin badan oo ku yaalo dhanka galbeed ee gobolka.
Degmooyinka ku yaala Västra Götalands län
Dooro degmada ah Västra Götalands län ee aad doonaysid inaad wax dheeraad ah ka akhrisato xagga hoose
Dooro degmo Dooro degmo Ale Alingsås Åmål Bengstfors Bollebyggd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Göteborg Götene Grästorp Gullspång Härryda Herrljunga Hjo Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Mölndal Munkedal Öckerö Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Töreboda Tranemo Trollhättan Uddevalla Ulricehamn Vänersborg Vara Vårgårda
Waxaa jiro 49 degmo, waxaana dagan 1,6 malyoon qof oo ku nool Västra Götaland. 600 000 oo ka mid ah intaas waxeey ku nool yihiin goobaha-Göteborg.
Guri yari ayaa ka jirto ku dhawaad degmooyinka gobolada dhamaantood. Waxaa jiro qorsho loo lee yahay in lagu dhiso guriyaal cusub oo badan laakin ma uu dhismooyaan sidii uu safka uu dheeraanaayo oo kale. Sidaas darteed waqti dheer ayee qaadan kartaa in la helo nuuca guriga la rabo hadana dad badan qarkood waa in ee guriyaal ku meel gaar ah dagan.
Bogga Boplats waxaad ka raadin kartaa guryaha ku yaala Göteborg iyo ag-agaarkeeda.
Akhri dheeraad ku saabsan gaadiidka dadweynaha oo ku taala bogga Västtrafik. Akhri dheeraad ku saabsan dalxiiska oo ku taala bogga Västsverige.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Västra Götalands län
Akhri dheeraad ku saabsan Jaamicada Göteborgs Universitet. Akhri dheeraad ku saabsan Jaamicada Chalmers tekniska högskola. Akhri dheeraad ku saabsan Jaamicada Högskolan i Borås. Akhri dheeraad ku saabsan Jaamicada Högskolan i Skövde. Akhri dheeraad ku saabsan Jaamicada Högskolan Väst i Trollhättan.
Haddii aad qabto cudurada caadiga, dhaawacyo ama xanun waxaad tageeysa rugta caafimaadka ee xaafadeedka. Halkani waxaa kale oo aad ka heli kartaa taageero iyo caawimaad in aad fiicnaysiiso caafimaadkaaga. Dhinaca bogga 1177 ee Hagaha daryeelka waxaa ku jira warbixin fiican oo ku qoran luqado kala duwan. Gudaha Västra Götaland waxaa ku yaala 18 isbitaal oo leh daryeelka bukaanka oo takhasus ah. Haddii aad si deg-deg ah u xanuusato waxaad wacaysaa 112. Xitaa dhinaca daryeelka ilkaha waxaad caawimaad ku helaysaa luqada kala duwan.
Akhri dheeraad ku saabsan daryeelka bukaanka ee maamulka caafimaadka gobolka Västra Götaland oo ku taala bogga 1177 Hagaha daryeelka. Akhri dheeraad ku saabsan daryeelka ilkaha ee maamulka caafimaadka gobolka Västra Götaland.
Akhri dheeraad ku saabsan maktabadaha gobolka Västra Götaland. Akhri dheeraad ku saabsan xuquuqda tamashlaynta.
Boggayada degmooyinkana waxaa ku jiro oo kale diiwaan-urureed oo aad ka arki karto ururada ka firfircoon degmo kasto.